Esihlokweni sethu esithi "Kuyadingeka ukuthi sikwazi ukuphumula okungenani ngenhloso yokuvimbela ukucindezeleka" sizokutshela indlela yokukwazi ukuphumula. Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi ukucindezeleka okuqhubekayo, ukukhathala, ukucindezeleka kuholele ekukhanda ikhanda, kuncishiswe ukusebenza kwethu, kubangele izinkinga zempilo. Siyehlisa ubuhlobo nabanye, siqala ukubheka okubi, sithukuthele.
Ngakho-ke, okungenani ukuze uvimbele ukucindezeleka, kudingeka ukwazi ukuphumula. Ngemuva kwesikhashana sokuphumula uzogcwala amandla namandla, indawo ephumule futhi ebuyiselwe kuyoba yinkinga yokucindezeleka, ukukhathala, isimo sengqondo sizophakama. Sizokutshela indlela yokuphumula kahle, nokuthi yini oyidinga ukuphumula.
Emzimbeni umphumela omuhle wokuphumula. Masikhulume ngalokhu ngokuningiliziwe. Ekuphileni kwethu kunezinto ezanele - okuhlangenwe nakho, izinkathazo kanye nezingxabano, nokuphumula kuzosiza ukuqeda imizwelo emibi. Okuhlangenwe nakho kwendondo ekuseni akubanga kubaluleke kakhulu, hhayi ukudluliselwa kabi, ngoba ukulala kungenye yezinketho zokuphumula. Kodwa kwenzeka ukuthi sidinga isikhathi esincane, isibonelo, ngaphambi kwengxoxo enzima nokubalulekile ukuze kunciphise ukungezwani nokubeka izinzwa zethu ngendlela efanele. Kulesi simo, udinga ukugxila ekuphefumuleni, phumula, nje uhlale kahle, bese injabulo ingayikufihla ingqondo yakho.
Ukuphumula kuyasiza ukuthuthukisa intuition, ngoba ubuchopho, ngaphandle kwemizwa, kungalalela izibonakaliso zezwi langaphakathi. Mayelana nokuphumula kuyaziwa ukuthi esimweni sokuphumula okujulile iningi lokutholwa lenziwe. Futhi-ke, uma ufuna impendulo yombuzo okukhathazayo, angazi ukuthi wenzeni okulandelayo, zama inqubo yokuphumula futhi impendulo izofika ngokwayo.
Ukuphumula kusiza ukuphumula, futhi akuyona iphutha, kuyiqiniso ngempela. Umuntu owazi ukuphumula futhi onomzimba wakhe uyokwenza kube nomuntu othembekile futhi okhululekile, futhi angeke abuke isikhathi eside, aqine futhi agxilwe.
Uma ukhathele, zama ukunikeza okungenani imizuzu embalwa yokuphumula, kungenzeka ukwenze ngaphansi kwanoma yiziphi izimo futhi ngeke uthathe isikhathi esiningi. Imizuzu engu-10 noma engu-15 yokuphumuza izokunikeza ukuphumula okuhle kakhulu, okungekho njalo ukulala kwamahora ayisishiyagalombili. Futhi-ke imizuzu embalwa kanye namandla okusebenza futhi ezingeni elifanele. Ungasebenzisa ukuphumula phakathi nosuku lonke lokusebenza, ngakho-ke uzosusa ukukhathala nokucindezeleka okuphelayo futhi ekupheleni kosuku ongeke ubukeke njenge-lemon elifakiwe.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukuphumula, ngakho ukucindezeleka nokucindezeleka okuqongelekile akuthuli izifo zesifo senhliziyo nesesifo kanye nesifo sezinkinga zesisu. Thola umkhuba wokuzidela ngezikhathi ezithile, kodwa kuyoba ngcono nsuku zonke, imizuzu embalwa yokuphumula.
Indlela engcono kakhulu yokuphumula, ngeke ihlukane. Kodwa akusibo bonke, ngeshwa lokhu kusebenza ngamandla. Sinikeza izindlela eziningana zokuphumula, ezitholakalayo kunoma yimuphi umuntu.
Indlela ehambisana nokuphefumula
Lapho sizwa imizwelo emibi - ukucindezeleka, intukuthelo, intukuthelo, ukukhathazeka, lapho ukuphefumula kwethu kungaphezu kwamandla, amaphaphu agcwele umoya kancane, hhayi ngokuphelele. Ngenxa yokuthi asikho umoya we-oxygen, sizwa ukuphathwa ikhanda, ukukhathala nomzimba wethu uqala ukuguga ngaphambi kwesikhathi.
Esimweni esinjalo, hlala esihlalweni endaweni ekhululekile, uphumule futhi uphefumule esifubeni, kodwa bukela umoya. Uma uthatha umoya ojulile, zitshele ukuthi: "Ngizizwa ngijabule," "Ngiyaqiniseka ngami," njalonjalo. Kuyoba okwanele nemizuzu emihlanu ukwenza imicabango yakho ifike ku-oda.
Indlela esekelwe ekuzindleni
Ngalendlela, umuntu ukhululekile ngokuphelele futhi agxilwe ekufuneni izimpendulo, imibuzo, ukufuna imibono emisha, nezindlela eziphuma kulesi simo. Ukwenza lokhu, hlala phansi "ngesiTurkey" noma uhlale esihlalweni esinemuva, ngakho-ke kulula. Sula izandla zakho uzibeke emadolweni, vala amehlo akho uphefumule ngokujulile, gxila ekuphefumuleni kwakho.
Ukuze uphonsa yonke imicabango ekhanda lakho, zama ukugxila egameni: ukuthula, impumelelo, injabulo, noma uqale ukubala, isibalo ngasinye esimele engqondweni yakho. Uma ngale ndlela ungakwazi ukukhipha imicabango, ucabange isibhakabhaka, sikhanya, sihlanzekile futhi sibomvu. Bese ucabanga ukuthi amafu ahamba kanjani esibhakabhakeni. Qinisekisa ukuthi kuvela isithombe esicacile, futhi noma yimuphi umcabango obonakala nje "uhlwanyela" kuleli fu, futhi uvumele "uhambe" ngalelifu.
Ukuze uthole imiphumela kule ndlela yokuzindla, finyelela ukungabikho komcabango. Qala kumaminithi angu-5 kuya kwangu-10 ngosuku, bese uletha kuhhafu yehora ngosuku.
Indlela esekelwe ekugxilweni
Le ndlela ifana nendlela eyedlule. Hlala phansi ngokukhululekile bese uzama ukugxila emazwini amahle, njengegama lomuntu othandekayo, injabulo, injabulo noma elinye igama lokuthi unemizwa enhle. Ake ucabange, leli gama liyinkimbinkimbi, ngombala, cabangela incwadi ngayinye yaleli gama, zisho kuwe. Yenza lo msebenzi uma nje kukunika injabulo. Lokhu kusebenza kusiza ukwandisa ukuhlushwa nokukhulula ukucindezeleka. Zama ukwenza ezinye izivivinyo, ngoba ungakwazi ukuphumula ngesikhathi ubukela izithombe, izithombe, ividiyo yokuzindla, ukulalela umculo okhethekile wokuphumula, ukugxila emizweni abayibangela.
Izindlela ezihlobene nokunyakaza
Futhi, ukuphumula kungakhuthazwa ngokuhamba eduze kwemvelo, ngaphandle kwedwa, ukuhlabelela ngombono walezo zinkinga ezikucindezelayo, ukunyakaza ngesikhathi nomculo, uhlobo lokudansa, ukuzindla ngokunyakaza okushelelekile ngesikhathi sokuthula umculo. Ungakwazi ukuphumula ngokuphelele kuphela wedwa, awudingi ukuzaza ukubonisa imizwelo yakho.
Izindlela ezihambisana nokuqinisekiswa nokuqeqesha ngokuzenzakalela
Ngosizo lokuqeqesha ngokuzenzakalela umuntu angakwazi ukulawula izinto ezingamlaleli esimweni esivamile. Izifo eziningi ziphathwa ngendlela efanele ngokuqeqeshwa ngokuzimela. Isisekelo salo sisekhona lapho umuntu ephinda ephindaphinda amafomu athile, isibonelo: imilenze nezandla ziyashisa, inhliziyo yami iyashaya ngokushelela nangokuthula. Ekuqaleni, ukuzivocavoca okunjalo kufanele kwenziwe ngochwepheshe.
Ukuqinisekiswa yizitatimende ezinjalo ezinhle futhi enye yezindlela zokusikisela okuzenzakalelayo. Ngoba, kucatshangwa ukuthi yizinto ezibonakalayo, umzimba wethu uzokholelwa konke esikucabangayo futhi sikhulume ngawo. Ukuqinisekiswa okunjengokuthi "Ngiyidonsa inhlanhla kimi", "Nginempilo" nabanye, bayamukelwa, okushiwo ngokuzethemba kwezwi nasesimweni esilaphukile.
Indlela yokuzilibazisa ngosizo lokugeza okuphumuzayo
Njengoba wazi, amanzi ayancipha, aqeda ukukhathala futhi abuyele emuva. Futhi indlela yokususa ukucindezeleka kuyoba ngamabhati afudumele afudumele. Engeza u-foam noma ubhavu obunamakha amafutha abalulekile ekugezeni, uphonsa yonke imicabango ekhanda lakho, uzicwilise ebhodini bese uzama ukuphumula. Ngemuva kwemizuzu engu-20 noma engu-30 uzozizwa uphumula futhi uqabulekile.
- Zama ukuhlukumeza ukudla noma utshwala. Kwabanye, kubonakala sengathi ukudla noma utshwala kunganciphisa ukucindezeleka nokuzola umuntu, kodwa konke kwenzeka nakwezinye izindlela.
- Yeka ukubhema. Kakade, ukubhema kuyinkinga engozini yokushisa komfutho wegazi ophezulu, futhi ngaphezu kwalokho, i-nicotine ibangela izimpawu zokucindezeleka uma zingena egazini.
- Ukuzivocavoca njalo. Ngokwesayensi okufakazelwe ukuthi labo abahlanganyela e-aerobics, bathola i-endorphin, izinto zemvelo ezithuthukisa isimo sabo sengqondo.
- Zama ukuphumula zonke izinsuku isikhashana.
- Zama ukungenzi amacala anjalo, okusobala ukuthi ngeke ubhekane nawo.
- Abaningi bakholelwa ukuthi kudingeka uhlanganyele ebhizinisini, futhi isikhathi sifushane. Funda isayensi yokuphathwa kwesikhathi sesikhathi - ukuphathwa kwesikhathi.
- Ekuphileni, faka imigomo yangempela wena.
"Yiba nokuphumula okuningi."
Indlela yokunciphisa ukucindezeleka? Ukwaziswa okuningi kokubili kuyi-intanethi futhi kunezincwadi ezikhona kule ndaba. Ukunciphisa ukucindezeleka kungasiza ukunciphisa umfutho wegazi lomuntu. Yiqiniso, umfutho wegazi ophezulu awukwazi ukunciphisa ngokunciphisa ukucindezeleka, kodwa ungathuthukisa isimo sesiguli, okuzogcina sithinte umfutho wegazi ophezulu.
Ngokuvamile abantu balayishwa kakhulu. Bheka uhlu lwamacala ozokwenza namhlanje nangomuso. Uzoqonda ukuthi ezinye izinto zakho ngeke zibaluleke. Zama ukuzinikela ezindabeni ezincane kangaka kuze kube yisikhathi esincane, bese uzibekela eceleni kusuka esimisweni sakho.
Philisa ngokujulile, phumula
Ngaphansi kokucindezeleka, inhliziyo isebenza ngokushesha kunokujwayelekile, ukuphefumula kuyaba msinya, futhi kuyinto engavamile. Ukuze uphumule esimweni esicindezelayo, phefumula kancane kancane.
Umsebenzi womzimba "ubulala" ukucindezeleka. Kodwa ngaphambi kokuba uhlanganyele kunoma imuphi umdlalo noma ukuzivocavoca, buza udokotela, ikakhulukazi uma uhlushwa isifo senhliziyo noma isifo somfutho wegazi ophezulu.
Ukuzindla noma Yoga
Lezi zinyathelo zisiza ukunciphisa ukucindezeleka kwegazi nokubhekana nokucindezeleka.
Ukuntuleka kokulala okungapheli kubangela ukwanda kwengcindezi yegazi nokucindezeleka.
Ukuzihlonipha nokucabanga okuhle, abavikeli abakhulu kakhulu ngokumelene nokucindezeleka. Thola okuthile okuhle esimweni ngasinye esibi.
Indlela yokufeza ukucabanga okuhle
"Thatha umoya ojulile, thola.
- Zisho njalo ukuthi uzobhekana nale nkinga.
- Zivumelanise nezimo, inhloso, ingokoqobo.
- Cabanga ngalokho ongakufunda kulokhu noma kule nkinga.
- Cabanga ngezixazululo ezahlukene bese ukhetha isixazululo esamukelekayo.
- Zibuze, yini engenzeka kakhulu, cabanga ngemiphumela.
- Ufundani kulokhu?
Ngeke ukwazi ukukhulula impilo yakho ezinkingeni ezicindezelayo, kodwa unganciphisa umphumela omubi wokucindezeleka emzimbeni
- Thola ukuthi yini ebangela ukucindezeleka?
- Gwema ukucasula okuncane okuncane. Isibonelo, uma ukuqhuma kwezimoto kukuholela ekuphumeni, bese ukhetha enye indlela yokuhamba, njenge-subway noma ibhasi.
- Uma kukhona izinguquko ezenzeka empilweni yakho, ungaguquki ngokuqinile. Sekuyisikhathi, yenza njengoba uthanda izinto othanda ukuzenza.
- Funda indlela yokwabela isikhathi ngokufanele nangendlela efanele.
- Ngesikhathi esithile, yenza into eyodwa, futhi ungabambeleli kuwo wonke umsebenzi olandelanayo.
- Uma unomuzwa wokuthi isimo esicindezelayo sisondela, thatha isikhathi. Khumula, phumula.
Udinga ukufunda ukuphumula ukuze ubhekane nokucindezeleka
Ukuphumula akugcini nje ukugxila embhedeni, ukuphumula kufanele kugqoke umzimba wakho nomphefumulo, futhi usebenza.
- Ukuphefumula okujulile. Cabanga ukuthi kukhona ibhola esiswini. Sifaka umoya, sicabanga ukuthi sigcwalisa ibhaluni. Ngemuva kokuphuma emoyeni, vula ibhola. Ngomoya ngamunye ukhulula ngaphezulu.
- Ukuphumula kwemisipha. Masishintshe imicabango yethu ekuphefumuleni kwethu nakithi. Sithatha ukuphefumula okumbalwa, kancane kancane. Masihambe ngemizimba yethu engqondweni. Ake sibheke izindawo zokuhlupha. Sula imisipha. Ngokuphindwe kabili ujika kancane ohlangothini ngekhanda lakho. Masiphendule amahlombe ethu emuva nangaphezulu. Futhi siphefumula ngokujulile, kumele sizizwe sikhululekile.
- Funda ukuzimela ezindaweni ezihlukahlukene ezimnandi, kungakhathaliseki ukuthi ulwandle oluzolile, ihlathi elithulile. Lokhu kukuvumela ukuba uphumule.
- Umculo ophumuzayo. Sizothola ku-intanethi noma kusitolo silomculo othulile othulile. Ikakhulukazi kule njongo kukhona umculo onjalo odayiswayo.
Ungayithuthukisa kanjani ukulala kwakho?
- Yakha umkhuba wokulala ngesikhathi esithile.
- Indawo kufanele ikhululeke, noma ngabe ulala: kufanele kube khona umcamelo okhululekile, ingubo kanye nombhede.
- Ikamelo kumele libe mnyama, lithele futhi lizolile.
- Ekamelweni lokulala udinga ukulala, akukhuthazwa ukuthi usebenze kukhompyutheni, bukela i-TV njalonjalo.
- Zama ukungalali isikhathi eside, usethe iwashi le-alamu ukuba lilale kancane.
- Uma, ngenxa yokukhathazeka, awukwazi ukulala, khuluma nesihlobo, umngane oseduze, nomuntu ongathanda ukumethemba.
- Uma kunokwenzeka, lalela umculo othulile othulile ngaphambi kokulala.
- Ungathathi amaphilisi okulala ngaphandle kokuthi abekwe udokotela.
- Ungaphuzi itiye noma ikhofi ngaphambi kokulala.
Manje siyazi ukuthi kuyadingeka ukuthi sikwazi ukuphumula okungenani ukuze kuvikelwe ukucindezeleka. Akufanele sikhohlwe ukuphumula, izinto ezingathandeki akufanele zihlehliselwe "kamuva", kumelwe sikholwe ngokwethu, futhi sidinga kuphela ukubala izinsuku ezijabulisayo.
Izindlela eziyisithupha eziphumelela kakhulu zokunqoba ukubola
Amathumba webele we-Benign
Ukukhetha igama lentombazane
Ungalanda kanjani esitolo se-intanethi?
Indlela yokunikeza ivolumu izinwele ezincane
Imoto engcono kakhulu yowesifazane
Indlela yokuheha ukunakwa kweSilwane
Isaladi nge-beet kanye noshizi
Indlela yokufunda ukuba umngane omuhle?
Vula i-apula pie
Ukunakekela izimbali zendlu: ama-violets
Ama-garlic ne-croutons ushizi